Homeसमाचारवृद्धभत्ता चाँडै ४ हजार पुुग्छ : प्रधानमन्त्री ओली
March 13, 2021 admin समाचार 3723
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वृद्ध’भत्ता बढाए चाँडै ४ हजार पुु-याइने घो’षणा गरेका छन् । तर, कहिले बढाउने भने मिति भने तो’केका छैनन् । अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय क’मिटीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा आ’योजना गरेको भेलामा ओलीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
‘यस देशमा जनता’लाई हेर्ने हामीबाहेक को छ ? गफ गरेर हुन्छ ? ०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट हामीले सुरु गरेको सामा’जिक सुरक्षा भत्ता, जसलाई त्यस’बेला वृद्धभत्ता भनियो अहिले त्यसलाई ३ हजार पुु-याएका छौं । ५ हजार पुु-याउने हाम्रो उद्देश्य छ,’ ओलीले भने,‘४ हजार त छिट्टै पुु-या’इहाल्छौं । छिट्टै पुु-याउँछौं हामी । तर, जनतालाई हेर्ने अरु कोही छ ?’वृद्धवृद्धा र शारिरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सर’कारबाहेक अरुले नस’म्झिएको दा’बी पनि उनले गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस्: नेपाली कांग्रे’सका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यो या त्यो बहा’नामा पार्टीको महाधिवेशन पछाडि धकेल्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन बागलु’ङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले कांग्रेसको महाधिवेशन समयमा नहुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बनेको टि’प्पणी गरे ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले राज’नीतिमा देखिएका विकृतिबाट देशलाई जतिसक्दो चाँडो मुक्त ग’र्नुपर्ने धारणा राखे । “अहिले महाधिवेशन गरेर बस्न पाएको भए कांग्रेसले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने राम्रो मौका आएको थियो, आज कांग्रेस आफै अधिवेशनविहीन अवस्थामा छ, अलपत्र पा’रिएको छ, यो दुःखद् छ”, वरिष्ठ नेता पौ’डेलले भने ।
विकसित रा’जनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसको काँधमा महत्वपूर्ण अभिभारा आएको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय प्रक्रिया’बाट राष्ट्रलाई निकास दिइने उल्लेख गरे । उनले सत्ता साझे’दारीका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबीच छल’फल चलिरहेको बताए । – रातोपाटीबाट
May 14, 2021 admin समाचार 3408
February 3, 2021 admin समाचार 4163
September 1, 2020 admin भिडियो, समाचार 14764
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220314)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (211968)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211668)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210417)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209206)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208333)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206807)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206599)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (194615)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175506)